Carlos Tevez oo si diirran loogu soo dhoweeyey dalka Shiinaha… + SAWIRRO – Gool FM
Carlos Tevez oo si diirran loogu soo dhoweeyey dalka Shiinaha… + SAWIRRO
Haaruun January 19, 2017
(Shanghai), 19 Janaayo 2017 – Taageerayaasha kooxda Shanghai Shenhua ee waddanka Shiinaha ayaa maanta si wacan ugu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha calamiga ah ee Shanghai Pudong, saxiixooda cusub ee Carlos Tevez.
Weeraryahankii kooxda Boco Juniors ee Waddanka Argentina Carlos Tevez ayaa ku biiray kooxda Shanghai Shenhua ee waddanka Shiinaha bishii hore, kaasoo ay kula soo wareegtay 10 Milyan oo Dollar, maanta oo Khamiis ah ayuuna gaaray dalka Shiinaha.
Carlitos oo 32 jir ah ayaa heshiis 2 sanadood ah u saxiixay Shanghai oo mushaar ahaan sanadkii u siin doonta 40 Milyan oo Dollar (38 Milyan oo Euros), taasoo micneheedu yahay in 2 sanadood uu jeebka ku shuban doono 80 Milyan oo Dollar.
Waxaana Tevez uu iminka yahay laacibka ugu Mushaarka badan Caalamka Kubadda Cagta, isagoo ka sare maray Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi.
Xavi oo xayaysiin yaab leh u sameeyay Qatar National Bank… (Daawo)
GOOGOOSKA: Algeria vs Tunisia 1-2